ကျောက်ပန်းတောင်း အသတ်ခံရတဲ့ မြွေမကြီးမှာ ကလေးမွေးပြီးတာ ၃ ရက်ပဲရှိသေး - CeleLove
May 2, 2019 Cele Love Up To Date News 0
သူ့ကိုသတ်သူအား မြွေကိုယ်​တိုင်​ဝင်​ပူးပြီး သူအ​ရေခွံကိုသူ့တွင်းဝမှာထား​ပေးရန်​ပြောသည် …. ။
ကျောက်​ပန်း​တောင်းမြို့​အောင်​မင်္ဂရပ်​ကွက်​ ကြွယ်​ဝ​တောင်​ဘုရားအနီး29-4-2019 ..မှ..30ရက်​​နေ့ဖြစ်​ရပ်​​လေးပါ။​ယခုပုံပါ လူငယ်​မှ ​မွေးကြီးအား သတ်​၍ အ​ရေခွံဆုပ်​ အပြီးအသတ်​ခံရ​သော ​မွေမကြီးမှ ဝင်​ပူး​နေသည်​မှာ ၂ရက်​ ရှိပါပြီ …. ။
အသတ်​ခံရ​သော ​မွေမကြီးမှာ သူက​လေးများ ၎င်း တွင်းထဲတွင်​ရှိ​ကြောင်း က​လေး​မွေးပြီးတာ ၃ရက်​သာ ရှိ​သေး​ကြောင်း ဝင်​ပူးပြီး​ပြောသံကြားရသည် …. ။သူအ​ရေခွံကို သူ့တွင်းဝတွင်​ ထား​ပေးရန်​နှင့်​နို့​သောက်​ချင်​​ကြောင်း မကြာခန​ပြော၏ …. ။လက်​​တွေ​ရောနှာ​ခေါင်း​တွေပါးစပ်​​တွေနဲ့ပါ တဖူးဖူးမှုတ်​၍ ဝင်​မလို​တွေဖြစ်​​နေလို့အနီးနားရှိသူ​တွေမှ​တောင်းပန်​ပီးလိုတာ​ပြောပါလို့​ပြောတဲ့အခနွားနို့​ပေးပါပဲ​တောင်း​နေပီးငါက​လေး​တွေရှိတယ်​လို့လဲ​ပြောပါတယ်​…. ။
နောက်​ပီးဒီနားကသတ္တဝါ​တွေလဲမသတ်​နဲ့သတ်​ရင်​ကိုယ့်​အပြစ်​ကိုာ်​ခံလို့လဲ​ပြောပါတာ်​ သုအ​ရေခွံဆုတ်​ပီး၃ရက်​အတွင်းလာထားပါရန်​လဲမှာပီးတွင်းထဲ​မြွေတွန်​သံလိုတဖူးဖူးမှုတ်​ပီးမှခန္ဓာမြှပန်​ထွက်​သွားပါသည်​ …. ။
သူ့ကိုသတျသူအား မွှကေိုယျ​တိုငျ​ဝငျ​ပူးပွီး သူအ​ရခှေံကိုသူ့တှငျးဝမှာထား​ပေးရနျ​ပွောသညျ …. ။
ကြောကျ​ပနျး​တောငျးမွို့​အောငျ​မင်ျဂရပျ​ကှကျ​ ကွှယျ​ဝ​တောငျ​ဘုရားအနီး29-4-2019 ..မှ..30ရကျ​​နဖွေ့ဈ​ရပျ​​လေးပါ။​ယခုပုံပါ လူငယျ​မှ ​မှေးကွီးအား သတျ​၍ အ​ရခှေံဆုပျ​ အပွီးအသတျ​ခံရ​သော ​မှမေကွီးမှ ဝငျ​ပူး​နသေညျ​မှာ ၂ရကျ​ ရှိပါပွီ …. ။
အသတျ​ခံရ​သော ​မှမေကွီးမှာ သူက​လေးမြား ၎င်းငျး တှငျးထဲတှငျ​ရှိ​ကွောငျး က​လေး​မှေးပွီးတာ ၃ရကျ​သာ ရှိ​သေး​ကွောငျး ဝငျ​ပူးပွီး​ပွောသံကွားရသညျ …. ။သူအ​ရခှေံကို သူ့တှငျးဝတှငျ​ ထား​ပေးရနျ​နှငျ့​နို့​သောကျ​ခငျြ​​ကွောငျး မကွာခန​ပွော၏ …. ။လကျ​​တှေ​ရောနှာ​ခေါငျး​တှပေါးစပျ​​တှနေဲ့ပါ တဖူးဖူးမှုတျ​၍ ဝငျ​မလို​တှဖွေဈ​​နလေို့အနီးနားရှိသူ​တှမှေ​တောငျးပနျ​ပီးလိုတာ​ပွောပါလို့​ပွောတဲ့အခနှားနို့​ပေးပါပဲ​တောငျး​နပေီးငါက​လေး​တှရှေိတယျ​လို့လဲ​ပွောပါတယျ​…. ။
နောကျ​ပီးဒီနားကသတ်တဝါ​တှလေဲမသတျ​နဲ့သတျ​ရငျ​ကိုယျ့​အပွဈ​ကျိုာ​ခံလို့လဲ​ပွောပါတျာ​ သုအ​ရခှေံဆုတျ​ပီး၃ရကျ​အတှငျးလာထားပါရနျ​လဲမှာပီးတှငျးထဲ​မွှတှေနျ​သံလိုတဖူးဖူးမှုတျ​ပီးမှခန်ဓာမွှပနျ​ထှကျ​သှားပါသညျ​ …. ။